पश्चिमी दर्शनले यसको ऐतिहासिक विकासक्रमलाई मुख्य गरेर ३ भागमा राखेर अध्ययन गरेको छ, प्राचीनकाल, मध्यकाल र आधुनिक काल। प्राचीनकाल ई.पू. छैटौँ शताब्दीदेखि ४३० सम्म रह्यो। प्राचीनकाललाई पनि पूर्वप्राचीन र उत्तर प्राचीन भनेर अध्ययन गरिएको छ। पूर्व प्राचीनकालमा प्रकृतिवादी दार्शनिकहरू देखा परेका छन्। थेल्स ग्रीसको मिलेट्सका पहिला प्रकृतिवादी दार्शनिक हुन्। उनले ई.पू.को छैटौँ शताब्दीमा ब्रम्हाण्डको आधारित तत्व पानी हो भनेका छन्। उनले वास्तवमा सूर्य ग्रहणको भविष्यवाणी गर्ने पहिला दार्शनिक हुन्। थेल्स पश्चिमी दर्शनका पहिला व्यक्ति भएकाले उनलाई पश्चिमी दर्शनका पिता भनेर पनि चिनिन्छन्। त्यसैगरी अर्को मिलेटियन दार्शनिक एनाक्सिमेन्डर हुन्। उनले थेल्सको विचारलाई अस्वीकार गर्दै यस्ता पृथ्वीहरू असत्य छन्। यिनीहरू सिर्जना र विनासबाट निरन्तर प्रक्रियाबाट अघि बढिरहन्छन् भन्ने तर्क राखे।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई डा. रिजालका प्रश्नैप्रश्न
प्राधिकरणको पोल र केबल प्रयोगको नयाँ भाडादर, इन्टरनेटको मूल्य बढ्न सक्ने